Semalt Kudzidza: SEO SeNyu Integrated Digital Marketing Strategy
Makambani eEndaneti anoda kuti pave nepo paIndaneti. Kana zvisina kudaro, vatengi vangadaishanyira webhusaiti yavo chete nekukanganisa kana kuda kuziva. Zita iro rinoshandiswa nechitoro, mavara aro uye zvigadzirwa zvinopa ruzivo runogona kurondedzerakune vatengi kuti vazivikanwe. Mashoko akafanana anokosha kana zvasvika pakuisa ruzivo runoita kuvepo kwebhu yebhizinesi - nuxe gommage miel. Mawebsite akashongedzerwa ane ruzivo rwakakosha kusarudza, uye vatengi vakawanda vanogona kuzviwana vasina basa.
Indaneti inosangana nemadhora gumi nemaviri ekutsvaga kwemwedzi. Kugadzirwa kweTsvaga Engine Optimization (SEO) iyo inonyanya webhusaiti iyo iri nyore kuwana inoshanda sechinhu chinokosha chekutsvaga nzira yekutengeserana kwekombiyutabhizinesi.
Kuburikidza neSeO, bhizimusi rinogona kutengesa vashandi varo kune webhusaiti yavo kuti vawane chiinzvimbo yacho ine yavo ikoko nekuwedzera mari yekambani. Izvi zvinogona kuwanika apo iyo firm inowana nguva yakakwirira yepamusoroTsvakurudzo yeGoogle Engine Result. Kutengesa kusununguka uye Pay Pay Per Click ndevamwe nzira dzakanakisisa dzakakurudzirwa.
Andrew Dyhan, Mutengi weKuteresi Achibudirira Semalt Digital Services, inopa zvinhu zvinokosha zvehuwandu hwemagetsi ekutengeserana mazano iyo bhizinesi rose reInternet rinoda.
sei SEO Works
SEO inoshandisa kushandiswa kweinjini dzine chinangwa chokukamba, kuongorora, kuchengetedza tsambauye kugadzirisa kushandisa shanduro sezvinotevera.
Kudzokorora kwechinhu chinokosha kunowedzera kukosha kweimwe peji peji.
Tsvakurudzo dzinotsvaga kushandisa metadata yedhidhi ye HTML sezvainopiwa neMate tagskuongorora kugutsikana.
Nhamba yehutano inoshandiswa inoshandisa mazwi anokosha ekufambisa vanhu vakawanda uye inovatungamirira kunzvimbo.
Hyperlink pane mamwe mawebsite anotarisa kune webhusaiti anopa nzvimbo yakakwirira yesite yepamusoro pemigwagwa yakawanda.
Tsanangudzo pamusoro pekunyoresa, kutamba, Search Engine Algorithms, nekudzorera kupakunyatsonzwisisa kunzwisisa kwe SEO maitiro.
Kukwezva kana kuti Spiders ndiyo software inotarisa webhu hunoenderana nekunyorakupa zvakakurumidza uye zvakanakisisa kusarudza kwemashoko gare gare nemitsva yekutsvaga. Munhu anokambaira haafaniri kutarisa zvinyorwa pamusoro peInternetzvinogadziridzwa zuva nezuva, asi inochengetedza zvinyorwa uye zvinyorwa pakutsvaga, kutorwa uye kushanyira nzvimbo dzekukurumidza kushandiswa nemajini.
Mharayi inoumba dheji yemapeji ezvakabikwa. Nhamba dziripochaizvoizvo ma database anopa ruzivo nezvemawebsite uye mapeji ewebhu anotariswa nenjini yekutsvaga. Kudzorerwa kwezvakanyorwa panerondedzero iri kuburikidza ne keywords uye yakanamatira michina. IOO inofanira kunge yakarurama kana injini yekutsvaga inofanira kunzwisisa webhusaiti.
Kutsvaga Engine Algorithms kune masheji ezvinyorwa zvakasiyana nemitemo inorondedzerakukosha kwewebhu peji. Vanokwanisa kuziva peji rechokwadi kana kana webhuti yehutachiwana ine ruzivo rwakakosha sezvinodiwa nemushandisi.
Chikamu chekupedzisira chekutsvakurudza kwe SEO chakabatwa peji yepakombiyuta inzira yakaoma iyokunosanganisira kunzwisisa kwezvinhu zvakatsvakurudzwa uye kuenzanisa nayo neyakakodzera indexes nemaseva. Mukupedzisira, injini yekutsvaga inotorarunyorwa rwemashoko akafanana ne keywords uye tambo yakashandiswa.
Kushandiswa kweSEO, naizvozvo, kunobatsira kuwanikwa kwehumwe humwewebsite yepamusoro pakutsvaga kutsvaga nyore nyore ne injini yekutsvaga. Sangano reSeO rokudhinda rinodhura zvikuru sezvo rinopakuonekwa kwebhizimisi kuita e-commerce nekushandisa zviri mukati mawebhu webhuni dzezvinjini.